महँगोमा प्याज बेच्ने तरकारी बजारका एक व्यापारी प’क्राउ – Rapti Khabar
महँगोमा प्याज बेच्ने तरकारी बजारका एक व्यापारी प’क्राउ
भदौ ३१, काठमाडौं । बल्खु तरकारी बजार होलसेलको एसके सप्लायर्स र चुली सगरमाथा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक सुनिल केसीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले प’क्राउ गरेको छ। बुधबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाले बल्खु तरकारी बजार अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज १ सय २० मा बेचेको पाइएपछि व्यापारी सुनिल केसीलाई महानगरीय प्रहरी वृत कालिमाटीको जिम्मा लगाइएको अनुगमनमा गएका उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले जानकारी दिए। उनकाअनुसार दुई वटा पसलको गरेर २ सय १९ बोरा प्याज सिल गरिएको छ।
अन्य व्यापारीलाई भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाइ सिफारिस गरिएको छ।
६ जना प्याज व्यापारीलाई कागज पत्र लिएर विभागमा आउन सूचना विभागले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका ६ जना प्याज व्यापारीलाई कागजपत्र लिएर विभागमा आउन सूचना दिएको छ। बजारमा प्याजको मूल्य एक्कासी बढेपछि विभागले मंगलबारदेखि कालिमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनमा जाँदा प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो ५७ देखि ९० र खुद्रा मूल्य एक सयदेखि १ सय १० सम्म लिएको उजुरी आएपछि विभागले ३ वटा खुद्रा पसल र तीन वटा थोक पसलका व्यापारीलाई कागज पत्रसहित विभागमा आउन आदेश दिएको छ।
‘हामी अनुगमनमा जाँदा व्यापारी बन्द गरेर गए,’ विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले भने, ‘हामीले समितिमा गएर मूल्य लियौं र पसल नम्बर ५ सय १५, ५ सय २४, ५ सय १८, ५ सय ३५, आरके ट्रेडर्सलाई विभागमा उपस्थित हुन सूचना टाँसेर आएका छौं।’
उनका अनुसार किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको बिल र मौज्दातको विवरण लिएर आउन निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमन गर्दा कालोबजारी गरेको पाइएमा ऐनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए। चाडबाडको बेला विशेषगरि विभागले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुगमन तीव्र पार्न पत्र काटिसकेको विभागले जानकारी दिएको छ।
ग्राहक बनेका मन्त्रीलाई नै प्याज व्यापारीले ठ’गेपछि…
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट बुधबार बिहानै लगनखेलस्थित कृषि तथा तरकारी बजार पुगे । उनी प्याजमा तोकिएभन्दा चर्को मूल्य लिएको थाहा पाएपछि त्यहाँ पुगेका थिए । मन्त्रीले प्याज किन्‍न खोजे तर व्यापारीले सजिलै चिने ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट अनुगमन गर्दै
उद्योगमन्त्री भट्टसँग व्यापारीले भने, “हामीलाई के भन्नुहुन्छ । हामीले प्याज ल्याउने बल्खु र कालीमाटी बजारबाट हो । त्यहाँ गएर सोध्नुस् न ।” त्यसपछि मन्त्री भट्ट मन्त्रीको गाडीमा नभएर अर्कै गाडीमा बल्खु पुगे । मुखमा मास्क थियो । नजिकै सुरक्षाकर्मी पनि थिएनन् ।
मन्त्रीले प्याज किन्‍न गोजीबाट पैसा झिके । ४८ रुपैयाँमा मिलिरहेको प्याज मन्त्रीसँग १२० रुपैयाँसम्म व्यापारीले लिए । उनले एक पसलबाट मात्रै होइन, २/४ पसलबाट प्याज किने । मन्त्री भट्टले बाह्रखरीसँग हाँस्दै भने, “मैले ५०/६० किलोसम्म प्याज आफैंले खरिदें । उनीहरुले चिनेनन् । व्यापारीले बदमासी गरेको पाइएपछि प्रहरी सक्रिय भयो । मैले स्थानीय प्रहरीसँग भने समन्वय गरेको थिएँ ।”
यसअघि बजारमा पर्याप्त उपलब्ध प्याज एकाएक अभाव भएको सूचना मन्त्रीसम्म पुगेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा आफूले छड्के अनुगमन गरेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । भारतले प्याजको निर्यात रोकेपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य आकासिएको छ ।
प्याजको मूल्य एकैदिन किलोमा ५० रुपैयाँले बढ्यो
तर एकैपटक स्टक रहेको प्याज सकिने अवस्था नरहेको र सस्तोमा किनेको प्याज महँगोमा बेच्‍न थालेपछि आफू अनुगमनमा निस्किएको मन्त्री भट्टले बताए । अनुमगनका क्रममा बल्खुस्थित तरकारी बजारका चारजना प्याज व्यापारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा राखिएको छ । अनुगमनका क्रममा प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज १२० रुपैयाँमा बेचेको पाइएपछि व्यापारीहरुलाई प’क्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बाह्रखरीबाट
Posted on July 24, 2019 Author Rapti Khabar
नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गर्दै सिंगापुरमा जारि टि-२० विश्वकप छनौट एसिया फाइनल प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। वर्षाको कारण ढिला सुरु भएको र ९ ओभरमा घटाइएको खेलमा टस जितेर नेपालले फिल्डिंग रोजेपछि ब्याटिंग गरेको मलेसियाले ७ विकेट गुमाएर ८३ रन बनएको थियो। ८४ रनको लक्ष्य नेपालले १ ओभर बाँकी रहंदा ३ विकेट मात्र […]
Posted on August 24, 2020 Author Rapti Khabar
अनुषा अधिकारी/सेतोपाटी काठमाडौं, भदौ ८ ऐश्वर्या केसीलाई सानैदेखि कम्प्युटर मन पर्थ्यो। चलाउन नआए पनि अनेकौं किताब हेर्दै सिक्न खोज्थिन्। कक्षा ६ मा स्कुलले नै कम्प्युटर विषय पढाउन थालेपछि उनलाई यसबारे झनै चासो बढ्न थाल्यो। बिस्तारै उनको रूचि कम्प्युटर गेमिङतिर मोडियो। गेमका लागि कोडहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्दै गइन्। यसरी गेमिङ हुँदै कम्प्युटर कोडिङमा लागेकी […]
प्याजको मूल्य आकाशियो, कति छ प्रति केजी ? हेर्नुस
बुधबार थपिए अहिलेसम्मकै बढी कोरोना संक्रमित, देशभर कुन जिल्लामा कति ? (विवरणसहित)